Kuwe insika kwezokwelapha - Ilanga News
Home Izindaba Kuwe insika kwezokwelapha
Kuwe insika kwezokwelapha
Kuthiwa uhlaselwe wumphakathi umsola ngokubhebhethekisa i-coronavirus eNorthern Cape
KUSOLWA usomqhele (Coronavirus) ngokuba nesandla ekuweni kwenqolobane yolwazi lwesintu eyisanuse ebesihlonishwa nangokushaya imihlahlo eshaya khona, uMnu Credo Vusamazulu Muthwa (98), okuvela ukuthi uhlaselwe wumphakathi waseMagojaneng, eKuruman, eNorthern Cape, umsola ngokubhebhethekisa leli gciwane kuleya ndawo.
Ekhuluma neLANGA izolo ngoLwesithathu uMnu Thulani Mutwa, oyindodana kaCredo, uthe ngempelasonto kuhlasele amalungu omphakathi esigodlweni sikayise ekhala ngokuthi ukungena kuphume izivakashi okuhlanganisa nezaphesheya kwezilwandle yikho okuzokwandisa lesi sifo.
Uthi lo mphakathi uhlasele uyise wathi kumele avale ukungena nokuphuma kwalezi zivakashi.
“Siyasola ukuthi lokhu kumhlukumezile kakhulu emoyeni ngoba phela ubesemdala, uvele wakhushukelwa wumfutho wegazi. Ngiyasola ukuthi uvele wakhumbula isikhathi sango 1967 ngesikhathi exoshwa wumphakathi eSoweto,” kusho yena.
Uthi njengomndeni bebengakakwazi ukuhlangana bahlele ukuthi angase afihlwe nini.
Uthi yize uyise ebesekhulile, kodwa baningi abantu abebetheleka esigodlweni sakhe beyothekela ulwazi, ngisho nosaziwayo imbala.
“Ngisho kuthiwa ubambekile, abantu bebefika bafune ukumthinta ngezandla, bathathe naye izithombe, abanye bahlale naye phansi babuze abafisa ukukubuza,” kusho yena.
Uthi ubenabantwana abawu-8, abanye babo sebendela kwelamathongo.
Omunye wabantu abathi bancele ulwazi oluningi kulesi sanusi, nguDkt Velaphi “VVO” Mkhize, we-Umsamo Institute.
“Njengomelaphi wendabuko ungifundise ukubekezela nokukwazi ukulinda idlozi lami lisebenze ngendlela yalo njengoba mina bengijaha. Ungifundise ukuba nothando nokunakekela iziguli, nokubaluleka kokuzihlonipha mina uqobo,” kusho yena.
Uthi uma ecabanga ngempilo enzima ephilwe nguMnu Mutwa, ufikelwa wubuhlungu ngoba uhlukumezeke kakhulu.
“UMutwa uhlukunyezwe wuhulumeni wobandlululo waphinde wahlukunyezwa wuhulumeni wethu imbala. Kuningi ukunganakekeleki abenakho ngaze ngafikelwa wumuzwa wokuthi ngimhloniphe ngonyaka odlule ngoba ngibona ukuthi uhulumeni wethu kawuzimisele ngokumnika indawo yakhe,” kusho uDkt Mkhize.
Yize ethi uqale ukuhlangana noMnu Mutwa esevele esekhulile, kodwa uthi nakhona ubesengumuntu onesineke esiyisimanga, onothando lwezinto zesintu namasiko ngokunjalo.
“Kubalulekileke ukuba nathi sifunde njengabelaphi bendabuko ukuthi kuningi esingaba yikho uma sizinikela ngothando obizweni lwethu, singagcini nje ngokuba yizangoma kepha kumele sikwazi ukuzichaza, sibonakalise ukuthi siwuhlobo luni. Uphinde wagqugquzela uthando lwemfundo kimina njengoba ebesho ukuthi kubalulekile ukuba siphinde sizihluphe ngokuba nolwazi ngezinto ezahlukene,” kusho uDkt Mkhize.
UMnu Mutwa, ongowokudabuka KwaZulu-Natal, yisangoma esizakhele igama ngokubhala izincwadi ezahlukene waphinde waba nemibono eminingi ngezigameko ezahlukene ezigcine zigcwaliselekile ngokuhamba kwesikhathi.
Udume ngezincwadi ezikhuluma ngezinto ezahlukene zesintu nezamasiko. Incwadi yakhe yakamuva yiTree of Life. Uhamba nje, ubesanda kuhlonishwa ngendondo ye-USIBA, eyinikezwa wumnyango wezobuciko namasiko ngemisebenzi yakhe nolwazi lwakhe olujulile lwezesintu.
Uphinde wazakhela udumo ngokuba yinjulabuchopho nokuqondanisa umhlahlo njengoba kubikwa ukuthi waboniswa ngokuvuka umbhejazane kwentsha ngo-1976 nokuthi waboniswa ngokukhishwa esikhundleni kukaMnu Thabo Mbeki kwesokuba ngumengameli waseNingizimu Afrika nokubulawa kukaChris Hani.
UMnu Mutwa wabhala imilando nezigigaba ezinkulu esezike zenzeka. Phakathi kwalezi zigameko wukuhlaselwa kweWorld Trade Centre, eNew York, mhla ka-11 kuMandulo (September) 2001, yisandulela-ngculaza nokubhebhetheka kwaso, wugqamcishi kagesi (load shedding).
Phakathi kwezincwadi azibhalile singabala i-Indaba, My Children ayibhale ngo-1960, yiSong of the Stars: The Lore of a Zulu Shaman (1996), yiZulu Shaman: Dreams, iProphecies and Mysteries (2003) ne-Woman of Four Paths: The Strange Story of a Black Woman in South Africa (2007).
Previous articleowe-da usinde bezama ukumduna
Next articleowesibaya nethemba lokuheha ababukeli ngendawo ayidlalayo